La Ogaaday: Kooxda Man United Oo Ku Fashilantay Saxiixa Daafaca Kooxda Atletico Madrid Ee Lucas Hernandez Inkasta Oo Ay Bixisay Lacagtii Lagu Bur-Burinayay Heshiiskiisa & Sababta Oo La Ogaaday – Kooxda.com
La Ogaaday: Kooxda Man United Oo Ku Fashilantay Saxiixa Daafaca Kooxda Atletico Madrid Ee Lucas Hernandez Inkasta Oo Ay Bixisay Lacagtii Lagu Bur-Burinayay Heshiiskiisa & Sababta Oo La Ogaaday
Kooxda Man United ayaa ku fashilantay in ay la soo saxiixato xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Lucas Hernandez suuqii xagaaga inkasta oo ay miiska saartay lacagtii 71 milyan ahayd ee lagu bur-burinayay heshiiskiisa sida ay sheegayaan wararku.
Jose Mourinho ayaa si aad ah u doonayay in uu la soo saxiixdo daafac suuqii xagaaga isaga oo bartilmaameedkiisa ugu waaweyn ka dhigtay Harry Maguire iyo Toby Alderweird.
Hernandez ayaa ka mid noqday xiddig fure u ah kooxda Atletico Madrid tan ilaa markii uu kulankiisii ugu horeeyay u saftay kooxda sanadkii 2014 isaga oo sidoo kale bartilmaameed u noqday United sida laga soo xigtay MARCA.
Waxa la sheegayaa in ay kooxaha reer Manchester ee City iyo United u dhaqaaqeen saxiixa xiddiga todobaadkii ugu horeeyay ee bisha August.
Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay miiska saareen lacagta lagu bur-burin karay heshiiska Hernandez kaas oo ku kacay lacag dhan 71 milyan oo euro iyaga oo diyaar u ahaa in ay u laba jibaaraan mushaharka uu ka qaato kooxda Atletico Madrid.
Laakiin kadib maalmod yar oo uu ka fikiray dalabka Hernandez ayaa iska diiday in uu u dhaqaaqo kooxda Man United isaga oo doorbiday in uu iska sii joogo kooxda Atletico Madrid.